Izitya ezi-7 eziqhelekileyo zaseMexico ekufuneka uzizamile | Iindaba Zokuhamba
ULuis Martinez | 28/04/2021 13:28 | IGastronomy, Mekhsikho
Ukuthetha ngokutya kwaseMexico, okokuqala, ukuthetha ngegastronomy echazwe njenge Inkcubeko yeLifa leMveli engabonakaliyo ngu-UNESCO. Le meko iya kukunika umbono wokubaluleka kunye nobutyebi baseMexico malunga nezitya zayo kwaye kutheni sikulethela olu khetho lwe-7 izitya eziqhelekileyo zaseMexico ongenakuphulukana nazo.
Ngapha koko, sijamelene nenye yezona ndawo zixhaphakileyo ehlabathini, kokubini ngokwezithako kunye nokwahluka kwezitya zayo. Singatsho ukuba ilizwe ngalinye kwaye isixeko ngasinye sinekhitshi laso. Nangona kunjalo, siza kuthetha nawe malunga nokutya okuqhelekileyo eMexico ngokubanzi, oko kukuthi, kwabo zokupheka eziqhelekileyo kwilizwe lonke.
1 Ukutya okuqhelekileyo eMexico: Imbali encinci
2 Izitya ezisixhenxe ezenza ukutya okuqhelekileyo eMexico
2.2 IBurritos kunye ne fajitas
2.3 Imole, enye iklasikhi phakathi kokutya kwesiqhelo eMexico
2.4 Ihagu yePibil
2.5 I-Escamoles kunye neentethe
2.7 Iidyuli: ilekese yeembotyi
Ukutya okuqhelekileyo eMexico: Imbali encinci
I-gastronomy yaseMexico yangoku sisiphumo se Yindibanisela yangaphambi kweColumbian substrate kunye nelifa laseSpain. I-Afrika, iAsia, uMbindi Mpuma kunye neempembelelo zaseFrance ziye zongezwa koku. Ukusuka kwihlabathi langaphambi kweSpanishi lithathe uninzi lwezithako zalo. Umzekelo, umbona, itshilisi, iimbotyi, iitumato, iavokhado kunye neziqholo ezininzi ezifana ipápalo, i-epazote okanye igqabi elingcwele.
Kodwa bonke badityaniswa ngabo bavela eYurophu njenge ingqolowa, irayisi, ikofu kunye namayeza anuka kamnandi afana Igqabi le-bay, ikumin, i-oregano, i-spearmint okanye i-coriander. Baze beza neSpanish inyama efana nengulube okanye inkukhu y iziqhamo ezinjengeorenji, ilamuni okanye ibhanana.
Njengoko besikuxelele, iziphumo zako konke oku kukutya okuphawulwe iyantlukwano phakathi kwamazwe ahlukeneyo enza ilizwe laseAztec. Ayifani nokuthetha malunga nesisu seBaja California kunokuthetha ngeChiapas uqobo. Kodwa konke ukutya okuqhelekileyo eMexico kunesiseko esifanayo. Singathi yonke isekwe kwizithako ezinje umbona, isilili neembotyi, Kwaye nakwezinye iindlela zokupheka umdlalo.
Izitya ezisixhenxe ezenza ukutya okuqhelekileyo eMexico
Iindidi ezininzi zokupheka ezenza ukutya kwaseMexico kwenza ukuba singakwazi ukuzishwankathela kwinqaku elinye. Ke ngoko, siza kugxila kwizitya ezisixhenxe onokuzifumana nakweyiphi na indawo yelizwe, ukusuka Sonora phezulu Veracruz (siyakuvumela Nantsi isikhokelo esi sixeko) Ukusuka Jalisco phezulu Quintana Roo. Ke ngoko, siza kukunikezela ngesindululo se-gastronomic esivela eMexico.
Mhlawumbi zizitya ethandwa kakhulu waseMexico, ukuya kwinqanaba lokuba bayigqithile imida yayo kwaye namhlanje inokufumaneka naphi na emhlabeni. Zibaluleke kakhulu kwindawo yokutya yelizwe eyenziwe ngabantu bayo setha amabinzana nabo. Umzekelo, "ukuphosa i-taco" kufana nokutya okanye "xa kungekho thando, ezinye iitacos al pastor."
Into enomdla kukuba, iresiphi yakho ayinakuba lula ukuyilungisa. Imalunga ne ingqolowa okanye ingqolowa yomgubo ngaphakathi apho kufakwa khona isithako. Kwaye ngoku kukho ixabiso leetacos kuba, kuxhomekeke kwinto abanayo ngaphakathi, banika iintlobo ngeentlobo zeesitya kwaye banikwa amagama ahlukeneyo. Kodwa ezimbini zezona zidumileyo zezi:
Iitacos zikamfundisi. Sele sibakhankanyile, kodwa ngoku siza kukuxelela ukuba zinantoni na. Ngokwesiqhelo, ukuzaliswa kwayo kukugcoba inyama yehagu, nangona inokubakho ne-veal. Le marinade ilungiselelwe ngeziqholo, i-achiote kunye nomhlaba obomvu. I-anyanisi, iinanapple kunye ne-coriander nazo zongezwa, kunye neendidi ezahlukeneyo zeesosi.
Iitacos zegolide. Kwimeko yabo, ukuzaliswa kwenziwa ngenyama yenkukhu, inyama yeembotyi kunye neetapile. Zoyosiwe ngale ndlela emva koko zagalela itshizi, lettuce kunye nesosi. Kwezinye iindawo, ziyatyiwa zikhatshwe yenye isosi eluhlaza okanye umhluzi wenkukhu apho zifakwe khona.
IBurritos kunye ne fajitas
IBurritos, ezakudala phakathi kokutya kwesiqhelo eMexico
Nangona ezinye iindlela zokupheka zinokuqwalaselwa, zisekhona tacos ezifakiwe zeemveliso ezahlukeneyo. Ngokwesiqhelo zenziwa ngeentlobo ezahlukeneyo zenyama, iipepile, amatswele kunye nesilili. Ukongeza, zihlala zihamba kunye Iimbotyi ezigqityiweyo kunye nezinye izinto zokuhombisa.
Singakuxelela ngokufanayo malunga quesadillas. Ikwangamaqebengwana ombona, nangona ukubalasela kwabo kukuba itshizi yinxalenye yokuzaliswa kwabo. Nangona kunjalo, ukuba unesibindi sokuzama enye into eyintsusa, cela enye, ukongeza kwizinto zemveli, eziphetheyo intyatyambo yethanga.
Imole, enye iklasikhi phakathi kokutya kwesiqhelo eMexico
Isitya se mole
Kwilizwe laseAztec, naluphi na uhlobo lwesosi eyenziwe ngalo Chili, ipepile kunye nezinye iziqholo ifumana igama lika imolekyulu. Kule nto kuvela into eyenziweyo ngeavokhado kunye nala mifuno. Njengoko usenokuba uqikelele, sithethile malunga guacamole, mhlawumbi isosi eyaziwayo eMexico ngaphandle kwemida yayo. Njengomdla, siya kukuxelela ukuba ibuyela kumaxesha angaphambi kweColumbian kwaye, kumaMeya, yayinophawu oluthandayo.
Nangona kunjalo, kule mihla, uhlobo oluthile lwesosi lubizwa ngokuba yi-mole elungelo lokutya okuqhelekileyo eMexico. Yiyo eyenziweyo kunye nepelepele kunye nezinye iziqholo, kodwa ine Imbonakalo yetshokholethi. Ngokongezwa, ikwabizwa kanjalo inyama okanye isityu semifuno esenziwe ngale sauce.
Nangona ilizwe ngalinye linendlela yalo, eyona nto ixabisekileyo ngaphakathi kweMexico yi imole poblano. Idume kakhulu kangangokuba, unyaka nonyaka, ibhiyozelwa kwi Puebla un umbhiyozo zinikezelwe kule sauce. Yenziwe ngeentlobo ngeentlobo zepelepele, itumato, itswele, igalikhi, itshokholethi emnyama kunye neziqholo. Ukuba uyazama, awuyi kuphoxeka.
IPibil ligama lesiMayan elalisetyenziselwa ukubhekisa kuko nakuphi na ukutya okulungiselelwe kwi eziko lomhlaba. Oku kwaziwa njenge pib Kulapho ke livela khona igama lesi sidlo. Ekuqaleni, yayidumile kwifayile ye- Usingasiqithi Yucatan, ilizwe elixabisekileyo apho Ungandwendwela esi sicebisa kulo nqaku. Kodwa isasazeke kuyo yonke iMexico nakwilizwe liphela.
Iziqulatho ze Inyama yehagu Ukuhlanjululwa kwi-achiote, i-spice eyayisetyenziselwa kumaxesha angaphambi kweColombia. Emva koko ibekwa kwi-oveni yomhlaba okanye efanayo ikhatshwa nge-anyanisi ebomvu, ipepile ye-habanero kunye neorenji emuncu. Konke oku kusongelwe ngamagqabi ebhanana ukuthintela ukuba angomi kwaye uyekwe upheke ubusuku bonke.
Ngokusengqiqweni, esi sidlo asisenziwa ngendlela yesiNtu, kodwa sisesimnandi. Kwisosi, ayipheleli nje ekungeneleleni, i-oregano, ikumin, ioyile yomnquma, iviniga kunye nejusi yeorenji emuncu nayo iyongezwa.
I-Escamoles kunye neentethe
Sifaka esi sidlo phakathi kokutya okuqhelekileyo eMexico kuba kuyinxalenye yako, kodwa siyalumkisa ukuba, mhlawumbi, awufuni kuzama. Isizathu silula. Ii-escamoles zezi imibungu yengqalutye Ezityiwa kwilizwe lama-Aztec ukusukela kumaxesha angaphambi kweColombia. Ukuba sikuxelela ukuba nabo bayabizwa "Icaviar yaseMexico", unokufumana umbono wokuba baxabiseke kangakanani. Zihlala zityiwa ziqhotswe kwaye zikhatshwa ngamaqanda kunye neziqholo ezinje nge epazote.
Ngokwalo icala, sinokukuxelela okufanayo ngeentethe. Imalunga ne intothoviyane encinci Ziyatyiwa ngokuqhotswa, nanjengoko kuthambisa isisu okanye kwii-tacos kunye ne-quesadillas. Ngayiphi na imeko, zombini ziyacetyiswa kwiipalati ezinobungqina.
Oku kunamandla stick Ibandakanya, ukongeza kumhluzi, iinkozo zombona zohlobo lwecacahuazintle, inkukhu okanye inyama yehagu kunye nezinye izithako. Phakathi kwezi, umzekelo, itswele, lettuce, ikhaphetshu, iradish, iavokhado, itshizi okanye iinyama zenyama yehagu.
Kwaye ungazifumana iintlobo ezininzi pozole. Nangona kunjalo, zonke ziwela ngokwamacandelo amabini: mhlophe, kulula kuba inombona nenyama kuphela kwaye iziqholo, ngakumbi kwaye inokuba nencasa ebabayo.
Kuya kufuneka sikhangele imvelaphi yayo kumaxesha angaphambi kweSpanishi. Ngapha koko, igama layo livela kwisiNahuatl tlapozonalli, Oko kukuthi "kubilisiwe" okanye "kubengezela", nangona ezinye ithiyori zibonisa ukuba igama lalo lifanele ukuba iposoli, Ixesha elivela kulwimi lwaseCahita olunokuguqulelwa ngokuthi "ukupheka umbona."
Iidyuli: ilekese yeembotyi
Asinakulugqiba ukhenketho lwethu lokutya okuqhelekileyo kwaseMexico ngaphandle kokuthetha ngeedessert. Ezinye zihambelana nabo sibaziyo kwilizwe lethu. Ayilolize, sele sitshilo ukuba ukutya kwaseMexico kunento eyomeleleyo ye-Hispanic. Yimeko ye Churros, i irayisi ipudding, i fritters okanye yingqube, ngokufana nokugcinwa kwethu.
Nangona kunjalo, ezinye iidessert ziyinxalenye yemveli. Enye yazo yi ilekese yeembotyi, Imveliso ekhoyo ngoku kwi-gastronomy yelizwe lama-Aztec. Yenziwe ngobisi, izikhupha zamaqanda, isinamon, iswekile, iiamangile ezichotshoziweyo, ii-walnuts kunye ne-cornstarch, ukongeza, ngokusesikweni kwiimbotyi eziphekwe ngaphandle kwetyuwa.
Kodwa zithandwa kakhulu levers, uhlobo lwekhekhe elilungiswe ngamanzi, ubusi, amandongomane angenatyuwa kunye nebhotolo. Singakuxelela okufanayo malunga isapoti emnyama, esisiseko saso sisiqhamo somthi ekuthiwa ngumthi kwaye sikhatshwa ngamaqanda, isinamoni kunye noshukela phakathi kwezinye izinto. I-flavour yayo inomdla kakhulu, ngokumangalisayo iyafana nale chocolate. Okokugqibela, sicebisa ingqolowa okanye ingqolowa entsha ekhokhweni. Ukuyenza ibe mnandi, ine-condense yobisi nesinamon kunye nezinye izinto ezinje ngamaqanda, ibhotolo kunye nomgubo. Imnandi nje.
Ukuqukumbela, sikuxelele malunga nezitya ezisixhenxe ezenza eyona nto iphambili ukutya okuqhelekileyo eMexico. Nangona kunjalo, sinokubandakanya abanye abanjengo isuphu yekalikapopulars Iifama, i iitshiphusi zeetotilla okanye marqueitas. Qhubeka uzame!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Mekhsikho » Izitya ezi-7 eziqhelekileyo zaseMexico ekufuneka uzizamile